ခန့်စေကောင်း၏ မကောင်း၏ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခန့်စေကောင်း၏ မကောင်း၏
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 12, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 29 comments
“ခန့်စေ ကောင်း၏ မကောင်း၏”
တစ်ရက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်း ခုံပေါ်ချထားတဲ့ ဂျာနယ်ကောက်ဖတ်လိုက်တော့
အဲဒီထဲက အင်တာဗျုးလေးတစ်ခုမှာ အခုခေတ်အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါ နီးစပ်ရာတွေကိုသာ
ကျနော်မမြင်ဘူးတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက် “ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း” ဖောင်လေးတွေ
ကျနော်တို့ ပရိုမိုးရှင်းချထားတဲ့ဆိုင်မှာတာဝန်ကျတဲ့ ကလေးတွေက
“ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း”ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် လူခေါ်တဲ့အခါ မှာဆက်သွယ်မယ့်အကြောင်းပြောပြရပါတယ်။
လကုန်လောက်မှ ခေါ်မယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ “ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း”တော့ထားခဲ့မယ်
အဲဒီမှာကျနော်သဘောပေါက်လိုက်တာက သူတို့က ဒီပြင့်နေရာတွေလဲ လိုက်လျောက်မယ်၊
ဒါနဲ့ဘဲ သူတို့ဆီက “ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း” နဲ့ ပညာအရည်အချင်းမိတ္တူကလွဲရင် အကုန်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်အလုပ်လုပ်ချင်လို့လိုက်ရှာနေရတဲ့ကလေးတွေကို မြင်ရတော့ ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကလဲ
အလုပ်နောက်ကို လိုက်ခဲ့ရတာကို ပြန်မြင်ယောင်လာမိပါတယ်။
ပါတီကောင်စီတွေတစ်ခေတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ “မဆလ ခေတ်”မှာတော့ လူတစ်ယောက်အစိုးရအလုပ်
လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ပါတီဝင်ဖြစ်ဘို့ရယ် အကပ်ရှိဘို့ရယ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမထူထောင်ချင်သော ၊မထူထောင်နိုင်သော မိဘများရဲ့သားသမီးတွေက
အစိုးရ အလုပ်တစ်နေရာရဘို့အတွက် “လမ်းစဉ်လူငယ်” အဲဒီကနေ တစ်ဆင့်တက်လို့ “အရန်ပါတီဝင်”
ဖြစ်အောင် အရင် ဆုံး လုပ်ထားရပါတယ်။
နောက် ပြီး ကိုယ်နဲ့ သိကျွမ်းတဲ့ရုံးတရုးံရုံးမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီးလုပ်အားပေးဝင်လုပ်ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြို့နယ်ကောင်စီရုံးတို့ ပါတီယူနစ်ရုံးတွေမှာပါ။
ဒီလို လုပ်အားပေးလုပ်တာတောင်မှ လွယ်ကူမယ်မထင်ပါနဲ့ အသိအကျွမ်းရှိမှလုပ်လို့ရတာပါ။
အဲလို လုပ်အားပေးထားတဲ့သူတွေက အလုပ်တစ်နေရာလစ်လပ်တာရှိရင် ရဘို့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အမျိုးအဆွေထဲက လုပ်ငန်းခွင်ရာထူးနေရာကြီးကြီးရှိနေရင်ဒါမှမဟုတ် ပါတီကောင်စီမှာ
ပါဝင် ပါတ်သက်နေရင် တော့ အလုပ်ရဘို့ သေချာပါတယ်။
“အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည်”ရှည်ရှည်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကတော့ “မိုးကျရွှေကိုယ်”တွေပေါ့။
သူ့ရဲ့နောက်လိုက်အစွယ်အပွားများကတော့ “ပလာစတာ အုံးအင်”တွေပေါ့။
အရင်ခေတ်က အလုပ်ရဘို့ဆိုရင် အတော်များများကေ ရေးဖြေအရင်ဖြေရပါတယ်။
မြန်မာစာ ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊အထွေထွေ ဗဟုသုတပေါ့။
အလုပ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် သူတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းမေးတာပါဘဲ။
အဲဒီလူတွေ့စစ်ဆေးတယ်ဆိုရင် ခေါ်ထားတာတော့ မနက် (၈)နာရီပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် တကယ်စမေးတာတော့ မနက်(၁၀)နာရီလောက်မှစပါတယ်။
သုံးနာရီဆိုပြီးပြီ ကိုယ်အလှည့်မရောက်ခင် သူတို့နားရင်တော့နောက်နေ့ပေါ့။
ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဂျာနယ် ။
အင်တာဗျူးမဖြေခင်လေးမှာလဲ ကိုယ့်အလှည့်မရောက်သေးခင်မှာ စာရွက်လေးတွေထုတ်လို့
ကိုယ်လိုသူလိုလာဖြေတဲ့သူအချင်းချင်းထဲကများ ခရားရေလွှတ်ပြောနိုင်သူကို အထင်တကြီးနဲ့
ဖြေပြီးတဲ့သူများထွက်လာရင် “ဘာတွေမေးလိုက်လဲ” လို့မေး။
သူကိုမေးလိုက်တဲ့အထဲက များ ကိုယ်မသိတာပါရင် စာအုပ်တွေပြန်လှန်လို့
ဒီလိုအလုပ်ခေါ်တယ် လူတွေ့စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာက အများအားဖြင့်ကတော့
မဖြေခင်ကတည်းက အဖြေက ထွက်ပြီးသား ခန့်ပြီးသားပါဘဲ။
ဌာနတစ်မှာအလုပ်ခေါ်ပြီဆိုကတည်းက သူ့လူကိုယ့်လူ အသီးသီးနေရာဦးပြီးသား၊
“မိုးကျရွှေကိုယ်”တွေက အလုပ်နေရာလွတ်မှာ အဆင်သင့်နေရာဦးပြီးသား။
“ကြီးကြီးမာစတာ”များရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအတွက် အလုပ်နေရာလွတ်ချန်ထားပြီးသားပါ။
ခန့်ထားပြီးသားတွေကို လူမြင်ကောင်းရုံ လောက်၊
တရားမျှတယ်လို့ အထင်ခံရရုံလောက်လေး ဟန်ပြခေါ်တာပါ။
အဲဒီခေတ်ကတော့ အလုပ်ရဘို့အတွက် ငွေပေးရုံနဲ့မရပါဘူး။
အလုပ်ခန့်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသူကို ကပ်ထားနိုင်တဲ့ “ပလာစတာ”ရှိမှ၊
ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာ ပါတီကောင်စီတွေမှာ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ
ရာထူးကြီးကြီး လက်ကိုင်ရှိသူမှာသာ အလုပ်ရဘို့လွယ်ကူနီးစပ်ပါတယ်။
အဲအလုပ်ထဲရောက်ပြန်တော့ နေရာကောင်းရအောင် ၊
ရာသီဥတု မှန်တဲ့ ဌာန မှာမြဲအောင်၊
ရာထူးတက်လမ်းရှိအောင်တွေ အတွက် အကပ်ရှာရပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာတော့ “အထက်ဖားအောက်ဖိ” ဆိုတဲ့ “ယိုးဒယားအက”တွေခေတ်စားလာပါတော့တယ်။
ဘာဘဲပြောပြော အဲဒီခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်လုံးကတော့ “ကပ်ဖားယပ်ဖား”တွေကြီးစိုးခဲ့တဲ့ခေတ်ပါဘဲ။
အရင် တံခါးပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးခဲ့တာရယ် ၊ပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့တဲ့သာဓကတွေရှိခဲ့တော့
ဘယ်နိုင်ငံခြားကရင်းနှီးမြု့ပ်နှံသူကမှ လာလဲ မလာရဲသလို အလာလဲမခံခဲ့ပါဘူး။
ထို့အတူ ဘဲ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားပိုင်လုပ်ငန်းတွေကလဲ မိသားစုလုပ်ငန်းသာသာလောက်
ဘဲ လည်ပါတ်နေတော့ လူအများကြီးအတွက်အလုပ်နေရာမပေးနိုင်တော့ လူငယ်လူရွယ်မှန်သမျှ
ဘွဲ့ရပြီးတာနည်း နည်းပါးလှစွာသောအစိုးရအလုပ်ကိုသာ စုပြုံတိုးနေရင်း ဘွဲ့ရအလုပ်လက်မဲ့
“လည်ရာ ပြန်စားရေး “ တွေဘဲ တစထက် တစ ပိုပို များများလာပြီးနောက်တော့လဲ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဘို့အတွက်ရရာ အလုပ်ကို ၀င်လုပ်ရပါတော့တယ်။
အဲဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ပညာတတ်ဘွဲ့ရလဲ အလကားပါဘဲကွာ ဆိုတဲ့ အတွေးနိမ့်နိမ့်တွေ စတင်လို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ပါတီခေတ်ကြီး လွန်မြောက်လာတဲ့ခေတ်မှာတော့ ခေတ်တွေပြောင်းလာသလို လုပ်ငန်းပုံစံတွေလဲ
ပြည်တွင်းပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပြည်သူပိုင်မသိမ်းဘူးဆိုတဲ့ ကတိတွေကြောင့် လည်း
ငွေကြေး ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တွေကလည်းလုပ်ငန်းတွေထူထောင်ရဲလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေက တရားမ၀င်ဘူးလို့အကြေညာခံရတဲ့ငွေကြေးထဲမှာပါသွားတဲ့
မြန်မာပြည်သားတွေကတော့ လုပ်ငန်းကြီးကြီးထောင်နိုင်သူ မရှိသလောက်ပါဘဲ။
မြန်မာပြည်သားစစ်စစ်တွေ ထက် မြန်မာပြည်ပေါက် နိုင်ငံခြားသားများက စက်ရုံလုပ်ငန်း၊
အထူးသဖြင့်အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုပ်လူမျိုးတွေက အများဆုံးထူထောင်နိုင်ပြီး ကျန်လူမျုိုးများထူထောင်တဲ့
တံခါးပိတ်ဝါဒအတွင်းမှာနေခဲ့ရတဲ့ ပြည်ပနဲ့အဆက်အဆံမရှိတဲ့ ကျနော်တို့ထက်စာရင်
ပြည်ပမှာ အမျုိးအဆွေများရှိနေတဲ့ သူတွေ အဆက်အသွယ်ကောင်းသူတွေက ပိုမိုပြီးမျက်စေ့ပွင့်
နားပွင့်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အလျင်အမြန်နဲ့ရှေ့ရောက်ခဲ့တာလဲ အမှန်ပါဘဲ။
ပိုင်ဆိုင်မူ့ရဲ့ ၂၅% ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ စီးမျောရင်း အမဲကနေ အဖြူဖြစ်ခဲ့သူများအတွက်
အဲဒီကာလက စလို့မြန်မာပြည်မှာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေ နေရာအနှံ့အပြားမှာပေါ်လာပါတယ်။
အဲတော့လဲ မြန်မာလူငယ်တော်တော်များများက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီအလုပ်က မခိုင်မာဘူး အစိုးရအလုပ်ကမှ ခိုင်မာတယ် အသက်ကြီးရင်ပင်စင်ရတယ်
ဆိုတဲ့အယူအဆရှိသူများကတော့ ကုမ္ပဏီအလုပ်ကို မ၀င်ခဲ့ပါဘူး။
ပွင့်လင်းရဲတင်းလာတဲ့ ဒီတစ်ခေတ်မှာတော့ လုပ်ငန်းတစ်နေရာအတွက်
ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ ကြေးသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကတော့ နေရာဌာနရဲ့ဘေးပေါက်ဝင်ခြင်းမ၀င်ခြင်းအပေါ်မှာ
တစ်ခါက မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့သမီးလေးက ကျောင်းပြီးသွားတော့အလုပ်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးအကူအညီတောင်းလာပါတယ်။
သူပြောတဲ့အချိန်က ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းက လူမလိုသေး။
နောက်သုံးလလောက်ကြာတော့ လုပ်ငန်းအသစ်ချဲ့ဘို့အတွက် လူလိုလို့ လှမ်းအကြောင်းကြားတော့
ဌာနတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်တာ တစ်လလောက်ဘဲရှိသေးတယ်။
အလုပ်ရအောင် (၅)သိန်းပေးထားရတော့ ဒါလေးကျေအောင်လုပ်ပါအုံးမယ်လို့ သိလိုက်ရတော့မှ
ဒါကလဲ ဘေးပေါက် နောက်ပေါက် အောက်ပေါက် တွေ ရှိတဲ့ ဌာနမျိုးမှာပါ။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြိုင်းအရိုင်းတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
စက်ကိရိယာ၊စက်ဆီချောဆီ၊စားသုံးဆီ၊နို့ဆီ၊ဘီယာ ၊အရက်၊အချိုရည် ၊ရေသန့် ၊ဆပ်ပြာမှုန့်၊ကော်ဖီမစ် ဆေးဝါးကိရိယာ၊အ၀တ်အထည်၊ အလှပြင်တဲ့ပစ္စည်း အစရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းလာတဲ့
စားသောက်ကုန်တွေ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ပေါ်လာတယ်။
မြန်မာပြည်ကနေ ပြည်ပကို ကောက်ပဲသီးနှံပြန်လည် တင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေထွန်းကားလာတယ်။
နောက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအ၀ယ်မဟုတ်တဲ့ ပညာရေး လူမူ့ရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။
ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေများပြားလာတာနဲ့အမျှ ၀န်ထမ်းကလည်း လိုအပ်လို့လာပါတယ်။
လုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်ဘို့ လုပ်ငန်းအသစ်တွေထူထောင်ဘို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို သတင်းစာက တစ်ဆင့် ခေါ်ယူရပါတော့တယ်။
ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လူပမာဏက မြို့ခံနဲ့တင်မလုံလောက်တော့တဲ့အခါ မြန်ုမာပြည်အနှံ့အပြားက
ကျေးလက်က လူငယ် တွေကလဲလခစားအလုပ်လုပ်ဘို့အတွက်မြို့တက်လာကြပါတယ်။
များပြားလှတဲ့ မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက် လုပ်ကိုင်ဘို့အတွက်လယ်မြေ ကလဲမရှိ၊
ရှိပြန်တော့လဲ ရာသီက မမှန်တော့ သီးနှံကထွက်၊
ထွက်ပြန်တော့လဲ ပွဲစားက ဈေးနှိမ်ဆိုတော့ မိရိုးဖလာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို စွန့်ပစ်ပြီး
တစ်ချို့ကြပြန်တော့လဲ မြို့တက်ကျောင်းနေရင်းကနေရွာမပြန်တော့ဘဲ ရရာအလုပ်ကိုဝင်လုပ်ကြပါတယ်။
အဝေးနယ်ကလာအလုပ်လုပ်သူက ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှာ ရောက်သွားပြီဆိုရင် သူတို့ နယ်ကလူတွေ
အခုခေတ်မှာစားသောက်စားရိတ်ကြီးတော့ ဘယ်သူကမှ လူအပိုကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်မထားပါဘူး။
ဒီတော့နယ်ကလာပြီး မြို့တက်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ (ကျား-မ မရွေး)လေးတွေက အဆောင်မှာ ၊
ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်နယ်ခံရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေပြီးအလုပ် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
နောက်တော့ မြို့မှာလူပေါင်းစုံ အတတ်ပေါင်းစုံ လိုချင်တာကအဲအစုံဆိုပြန်တော့
လောင်းကစားဘက်ကို ဖက်တဲ့လူက ပိုဆိုးပါတယ်။
ကောင်းမယ်ထင်လို့ ပွားလိုက်တာလေးက ပလုံသွားရင်ကုမ္ပဏီက ငွေကို ခဏလှည့်သုံးတတ်ပါတယ်။
သုံးရင်းသုံးရင်းက များများလာတော့ ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ဘ၀ရောက်သွားပါတယ်။
ကိုယ်ဧရိယာမှာဘဲ ကိုယ့်နေရင်းနေရာလေးမှာ နေရရင်တော့ ဟိုကရတဲ့ပိုက်ဆံဒီစာရင်းထဲထည့်
ဒီကပိုက်ဆံကို ဟိုဘက်ထည့်နဲ့ အကြံအဖန်လုပ်ပြီးထိန်းထားနိုင်ပေမယ့်
ကိုယ့်နဲ့ အခြားသူနဲ့အရောင်းဧရိယာချင်း ပြောင်းတာတို့ စာရင်းစစ်ဝင်တာတို့နဲ့
တိုက်ဆိုင်ချိန်မှာတော့ အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတာတွေပေါ်မှာစိုးတော့ အလုပ်ကနေထွက်သွားပါတော့တယ်။
အလုပ်ကို တစ်ရက်က နှစ်ရက်မလာလို့ မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ လမ်းစပျောက်သွားပါတော့တယ်။
အဲလိုတွေဖြစ်ပါများတော့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ထိခိုက်နစ်နာတာတွေရှိလာပါတယ်။
ငွေဆုံးတာထက် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ကိုယ်ဖောက်သည်တွေက ယုံကြည်မူ့အားနည်းတာမျိုးကိုကြုံရပါတော့တယ်။
အဲဒီကစလို့ ငွေကြေးနဲ့ဆက်စပ်ပါတ်သက်နေတဲ့ တာဝန်မျုိးအတွက် ၀န်ထမ်းခန့်ထားမယ်ဆိုရင် သိကျွမ်းတဲ့လူခံ
ကိုယ်တစ်ခါမှ မသိသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကို သူယူလာတဲ့အထောက်အထားစာရွက်လေးကိုကြည့်
ဟိုမေးဒီမေးလုပ်ပြီး ဆယ်မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ လူတစ်ယောက်ကို အကဲခတ်ရ ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတာ
အဲတော့လဲ ကိုယ့်ဆီမှာလုပ်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့၊
အကြောင်းသိ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေထဲက ဘဲ အလုပ်ခေါ်ပါတော့တယ်။
ဟိုးအရင်ခေတ်က အကပ်ရှိမှာ အလုပ်ရဘို့လွယ်ကူတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေတ်မှာတော့ ငွေနဲ့ရင်းရင် ရတယ်။
ခက်တာက ကျနော်တို့လူမျိုးက ဒီလိုလုပ်ငန်းအတွက် အခကြေးငွေပေးရရင်နှမျောတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်ရင်လဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေက စိတ်ထဲမှာစွဲနေကြတာကိုး။
အဲတော့လဲ ဒီလို အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကနေတစ်ဆင့် ခန့်တယ်ဆိုတာကလဲ
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို အဓိက မထားဘဲ နီးစပ်ရာ လူကိုခန့်တာများလာပြန်တော့
လူငယ်တွေရဲ့ အရည်အသွေးက တစ်စထက်တစ်စ ကျဆင်းလို့လာပါတယ်။
အလုပ်သာလာလျောက်တယ် ကိုယ်လာလျောက်တဲ့ လုပ်ငန်းက ဘာလုပ်မှန်းမသိတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပါဘဲ။
အလုပ်ရှင်ကလဲ စိတ်ချရရင်ပြီးရော အလုပ်ထဲရောက်မှ သင်ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အရင်ရောက်သူတွေက ၀ိုင်းသင်နဲ့ လုပ်ငန်းလေးလည်း နည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာရော
လုပ်ရတာ မတန်ဘူးလို့ထင်လာတော့ အလုပ်ကထွက်။
တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ ဂျစ်ပဆီများလုိ့ လျောက်ပြောင်းနေတဲ့လူငယ်တွေသာများများလာပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ လုပ်ငန်းတွေလဲ မရှားပါဘူး။
ရှားနေတာက အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်ရယ်
ကိုယ့်ဆီလာ အလုပ်လုပ်တဲ့လူငယ်ကို မြေတောင်မြှောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေသာ
တချို့တွေများဆိုရင် သစ်သားပြားမှာ သင်္ဘောဆေးနဲ့ရေးပြီး
ကဲ ရှေဆက် ဒီလိုဘဲ စခန်းသွားနေကြမယ်ဆိုရင်
ဖွဘုတ်မှာတင်တာ နည်းနည်း စောတယ်နော်
အချိန်ကိုက်တင်ပေမယ့် ဖွဘုတ်က အချိန်အတိအကျတင်မရဘူးလေကွယ်။
နောက်ဖွဘုတ်က ကိုယ့်ဝေါပေါ်ကိုယ်တင်ရတာဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေစောပါ၏။
ကျမ ၀န်ထမ်း အကြို ဖောင် ကြီး သင်တန်း တတ်တော့ဌာန ကောင်း ကောင်း မှာ ၀င်ခွင့် ရပြီး လာတတ် တဲ့ အမျိုး သမီး တစ်ယောက် ကို လူ တစ်ယောက်က ပြောတာ ခင်ဗျား ဒီ ဌာန မှာ ရတာ တော် လို့ ရ တာ ဖြစ် မယ် တဲ့ ။ ပထမ တော့ အမျိုး သမီး လည်း ကြောင်သွား ပြီး ကျမ မတော် ပါ ဘူး လို့ ပြန် ပြော လိုက် တယ်။ ဟိုလူ ကလည်း ဆက်ပြော တယ်၊ ခင်ဗျား တနေရာရာ မှာ တော် ရင် တော် မတော်ရင် အမျိုးတော့ တော် လိမ့် မယ်တဲ့ ။ အဲတော့ မှ အမျိုး သမီး လည်း သဘော ပေါက် ပြီး စိတ်တွေ ဆိုး တော့ တာပဲ။ အဲဒီ အမျိုး သမီး က တကယ်လည်း အဲ လို ရ လာခဲ့ တာ။
အစိုး ရ ၀န်ထမ်း လော က မှာတော့အရည် အချင်း က အဓိက မကျ ပဲ လေးပေါက် ပြော သလို ရပေါက် ရလမ်း ကောင်းတဲ့ ဌာန တွေ ဆို ပေါက်ဈေးတွေ၊ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းတွေ ရှိ နေ တုန်း ပါပဲ။
ကျမလုပ်ခဲ့ တဲ့ ဌာန ကတော့ အဲလို ဘေးပေါက် မရှိတော့လူ စိတ် မ၀င်စား လို့ ကျမ အတွက် တခါတည်း ဖြေ တခါတည်း ရ ဆို သလို (ကိုယ့် ဘွဲ့ နဲ့၊ လုပ်ရ မယ့် အလုပ် နဲ့ လုံးဝ မဆိုင်တဲ့ သတင်း စာ ထဲက မိန့် ခွန်း တွေ ၊ သတင်းတွေ ကျက် လိုက် ရ တာ က လွဲ လို့ ) အရာ ရှိတန်းအလွယ် တကူ ဖြစ် သွားခဲ့ တာပဲ။
ဖောင် ကြီးအတူ တတ်ရ တော့ မှ ဌာန ကောင်း တွေ ကို ၀င်လာ တဲ့ သူ တွေ က ကိုယ့် လမ်းကြောင်းတွေ နဲ့ ကိုယ် လာကြ မှန်း သူတို့ တိုက် ရိုက် မပြော ပေမယ့် သူတို့ အချင်းချင်း ပြော စကားတွေ ကနေ ရိပ်ဖမ်း သံ ဖမ်း သိ ခဲ့ ရတာ။
ကျနော်က 1978 မှာ ဖောင်ကြီးကို အောက်တန်းစာရေး ဘ၀(ကျနော်အောက်မှာ ပြာတာနဲ့ဒရ၀မ်ဘဲကျန်ပါတယ်)က တက်ဘူးပါတယ်။
အသားဟင်း အတုံးသေးသေးလေး တွှေ သုံးရက် တစ်ခါစားရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ရက်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဖရုံသီးဟင်း
ပဲပင်ပေါက်အခင်းထဲ ကို ပုစွန်ဆိတ်လေးတွေဖြတ်တာကိုစားရပါတယ်.။
နောက်လ အကောင်ကြီးကြီး (ကိုခင်ခပြောတဲ့အကောင်နဲ့မတူဘူးနော်)လဲ
ခေတ်အဆက်ဆက် ဘက်လိုက်မူ့ မျက်နှာလိုက်မူ့ တည့်တည့်ပြောရင် ဒီလိုမတရားမူ့တွေက
နေရာတိုင်းဌာနတိုင်းမှာရှိနေတာ ကတော့ အမှန်ပါဘဲ။
ဒီမိုကရေစီလို့ ပါးစပ်မချတမ်းအော်နေတဲ့ နေရာတွေမှာလဲ ဘက်လိုက်မူ့ကတော့ ရှိနေတာအမှန်ပါဘဲ။
“အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည်”ရှည်ရှည်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကတော့ “မိုးကျရွှေကိုယ်”တွေပေါ့ ဆိုလို့ ပြောရအုံးမယ် ကိုပေါက်ရေ၊ ကျွန်တော်ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်ရှာတော့ အဲ လို အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် တစ်ယောက်ရဲ့ထောက်ခံပြောပေးမှု့နဲ့ ကုမ္မဏီအလုပ်ထဲရောက်တာဗျ။
အဲဒီသူက ဘုံကျောင်းမှာ တရုတ်နဂါးကတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လေ၊ လူကခပ်၀၀ နဂါးကိုကိုင်ပြီး ကတော့ အကောင်းကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် ပေါ့နော်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်၊ အဲ ကိုပေါက်ပြောသလို ကျွန်တော်က မိုးကျရွှေကိုယ်တော့ ဟုတ်ပါဘူးဗျ။ မြေကြီးပေါ်လမ်းလျှောက်လို့ ပလက်ဖောင်းလဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်တတ်သူပါလေ။
-၀မ်စွေ့………၀မ်စွေ့………….၀မ်ဝမ်စွေ့ ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဘဲဖြစ်ရမယ်။
သူတို့ ဘုံကျောင်းလူကြိးဆို အရမ်းလေးစားတာလေ။
လေးပေါက်ရေ ဒါတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ၀န်ထမ်းလဲဝန်ထမ်းအလျှောက်
မှန်မရောက်နိုင်ကြသေးတာပါ အမျိုးတွေခန့်ပြီးအမျိုးတွေကြီးစိုးတဲ့ company မှာ
company နာမည်တာ့မပြောလိုတော့ပါဘူး ကိုယ်လည်းဝန်ထမ်းမို့လို့ အစ်မတစ်ယောက်
လုပ်နေတဲ့ company ဆိုပိုင်ရှင်ကပညာမတတ်တဲ့အမျိုးတွေကိုခေါ်ခန့်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေး
မှာထားတယ် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်မပိတ်ပါဘူး တနင်္ဂနွေ ၁ ရက်သာပိတ်ပါတယ်။ OT မဆင်း
ရင်ငြိုငြင်တယ်နှိပ်ကွပ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းက ဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသေဖြစ်စေ OT ဆင်းကြ
ရပါတယ်။ အဲဒီလို company တွေကဒုနဲ့ဒေးပါ အဲဒီတော့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်
ပြင်ပလုပ်ငန်းကတော့ မယ်ဂျူးပြောသလို အမျိုးအဆွေတွေကိုနေရာပေးမှာအမှန်ပါဘဲ။
ကတညုတ ကတဝေဒီ တဲ့ အမျုိးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရာ၏တဲ့။
သူတို့က ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ ငွေကြေးရှိနေတော့ သူတို့ စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်သလို စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မပါတဲ့လူတွေက ၀င်ပြီး ဆရာလုပ်ကြ ချယ်လှယ်ကြတာကမှ
အသက်ကြီးလာလေ လေ ပိုပြီးယုံကြည်လာတဲ့ အတွေးကတော့
တရားမျှတမူ့ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ မှ မရှိဘူးဆိုတာပါ။.
ကျနော်မှ မရောက်ဘူးတာကို မဝေဖန်ပါဘူး။
မျှတမှုဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမှ မရှိဘူးဆိုတာကို
ပြည့်သူ့ ဘဏ္ဍာငွေထဲကပေးရတာမို့ ရပ်တန့် ဘို့ ကောင်းပါတယ်။
နတ်မောက်မြို့ မှာအမေစုပြောတဲ့မိန့် ခွန်းစကားကိုနားထောင်ကြည့်တာမှန်မှမှန်။
(ရှားနေတာက အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်ရယ်
မှတ်သားစရာပါပဲ ကိုပေါက်ရေ။ :hee:
၀န်ထမ်းဖက်က လဲ ဓခုရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက်”ဘဲ။
ပိုင်ရှင်ဘက်က လဲ “ငွေတစ်မတ်နဲ့ငါးကြင်းခေါင်းကိုင်”တာပါဘဲ။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်ချင်းတူသွားရင် အချိုးညီသွားရင် ရေရှည်လက်တွဲလို့ရပါတယ်။
မနိုင်လို့ သီးခံရခြင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
လက်ရှိအလုပ်မှာ ကျနော် 1995 တစ်လကို လခ မြန်မာငွေ”သုံးထောင်ကျပ်”ကနေစလက်တွဲပြီးလုပ်လာတာပါ။
ဒီပြင့်အလုပ် လုပ်မစားတတ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိနိူင်းရနေလို့ အဆင်ပြေနေတာပါ။
၀န်ထမ်းဘ၀ လခစားဘ၀ကို ကိုယ်တွေ့ အလုပ်ရှင် အနေဖြင့်၎င်း
၀န်ထမ်း အနေဖြင့် ၄င်း မကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသေးတဲ့ အတွက်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို
ယခုလောက် ထိနားမလည်ခုဘူးခင်ဗျ။ အခုလိုဗဟုသုတ ဖြစ်စေတဲ့အတွက်
၀င်ဖတ်ရကျိုးနပ်လှပါ၏။ စောင့်မျှော်အားပေးနေပါဦးမည်. . . . . . . . . .
သူဌေးကသာ အလုပ်လုပ်ရတာ သူ့သားက အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘူးလေ။
ဆားပုလင်းမင်းအောင် နည်းဗျူဟာနဲ့မှန်းသွားတာ မှန်သလိုလို မှားသလိုလို ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ
ပိုင်ရှင်လဲမဟုတ် ၀န်ထမ်းလဲမဟုတ်ဆိုတာ …ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အရင်းအနှီးကလေးဖြင့်
တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မိမိလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်လေးတွေလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု့တာ
ဖြစ်ပါတယ်ခင့်ဗျ။ အဲ့ဒီအတွက် ပိုင်ရှင်လဲမဟုတ်သလို ၀န်ထမ်းလဲ မဟုတ်ပေဘူးဗျ။
မိမိခံယူချက် အယူအဆအရ သူတစ်ပါလက်အောက်၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုလိုသဖြင့်
မိမိဖာသာ မိမိရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဦးစားပေး တွေးခေါ်လုပ်ကိုင်ပါ၏။
၀န်ထမ်းဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲတာကို လေးပေါက်ဆွေးနွေးပြမှ သိတယ် … သမီးအလုပ်ဝင်တုန်းကလည်း အလုပ်ထဲမှာ လူခံရှိတော့ မပင်မပန်းရခဲ့တယ် …. လောကကြီးက ဒီလိုပါပဲ “မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါပါ” လေးပေါက်ရာ ………
အဲဒါ ဘ၀သံသရာပါဘဲ မယ်ခိုင်ရေ
ဒါဆို မန်းတလေး ဂေဇက်မှာ ၀န်ထမ်းခေါ်ရင် ရအောင် ဘယ်သူ့ ကို ပလာစတာ အုံးအမ် လုပ်ထားရမှာလဲ လေးပေါက်ရေ။အဟိအဟိ အဆဲခံရတော့မယ်နဲ့ တူတယ်
ကျွန်တော် အခုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အလုပ်မှာ ၀န်ထမ်းတချို့က လုပ်သက် ၁၆ နှစ်၊ ၁၅နှစ်၊ ၁၄နှစ်၊ ၁၃နှစ်၊ ၁၂နှစ်၊ ၁၀နှစ် ၊ ၇နှစ် အသီးသီးရှိကြပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် တချို့ဝန်ထမ်းသစ်တေတွတော့လဲ လုပ်သက် နှစ်ပတ်နဲ့ထွက်၊ တစ်လနဲ့ထွက်၊ နှစ်လနဲ့ထွက် ပါပဲ….
တကယ်တော့ အဲသလို ခဏ၀င်လိုက် ပြန်ထွက်လိုက်က ပိုများပါတယ်…
အထွေထွေဝန်ထမ်းဆို ၀င်ခါစမှာ တစ်သိန်းနီးပါးပဲ ပေးတာကိုး..
ဒါ့ထက်ပိုပေးရအောင်ကလဲ လုပ်ငန်းက ၀င်ငွေမှမလောက်တာ….
တစ်နှစ်တစ်နှစ် လုပ်ငန်းကလဲ ၀င်ငွေမတိုးဘူး… ၀န်ထမ်းကလဲ လစာမတိုးဘူး…
မဖြစ်မနေပေးရတဲ့ ဆက်ကြေး တွေ ကတော့ အဆမတန် တိုး တိုး လာတာ ကိုပေါက်ရေ…
ကျနော်တို့ဆီကို နယ်ကနေလာအလုပ်လုပ်တဲ့ကလေး လစာ ရှစ်သောင်းထက်ပိုမပေးနိုင်တာလဲအမှန်ပါ။
သူ့ဆီက လုပ်အားပြည့်ပြည့်၀၀မရသေးခင် များများ မပေးနိုင်ပါ။
နောက် မလောက်မှန်းသိပေမယ့် ၀န်ထမ်းအများထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲကွက်ကြည့်လို့မရပါ။
လုပ်ငန်း စည်ပင်တိုးတက်မှာသာ ၀င်ငွေကောင်းကောင်း ရမယ်ဆိုတာကိုလဲ ၀န်ထမ်းများသဘောပေါက်ဘို့လိုအပ်သလို
ပိုင်ရှင်လုပ်သူကလည်း ရသများ သူ့အိတ်ထဲ သိမ်းကြုံးထည့်မယ်ဆိုရင်လဲ အဆင်မပြေပါ။
လုပ်ငန်းရှင်ကောင်းစွာ မြတ်စွန်းလည်ပတ်နိုင်ဘို့က နိုင်ငံ ရဲ့ စိးပွားရေး စစ်ရေး
တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး အထက်အဆင့် ရာထူးရသူများက တရားမျှတစွာလုပ်ဆောင်ဘို့ အမှန်လိုအပ်ပါကြောင်း။
သူတို့အဆင်ပြေမှ သူ့လက်အောင်ဝန်ထမ်းများလည်း အဆင်ပြေပြေ ရေရှည်နေနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ခက်တာက ကျမတို့ဆီမှာ ၀န်ထမ်းကို Job description လည်း ပီပီပြင်ပြင်ပေးလို့မရ(အလုပ်တွေကလည်း ကြုံရာကွေ့မှာ ကြုံတဲ့ တက်နဲ့လှော်နေရတာကိုး)၊
၀န်ထမ်းရဲ့ ရိုးသားမှု၊အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကို ထိန်းချုပ်စရာစနစ်ကောင်းလည်းမရှိသေး။
ပေးရတဲ့ လာဘ်(Transaction costတွေ)ကလည်းများ
ဆိုတော့ ဘယ်တော့များမှ ရွှေလသာပါ့မလဲလို့ ……..
အတိအကျပြောရရင် ကျနော်တို့ အခု လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတာက ညှိနိုင်းမူ့နဲ့ပါ။
အလုပ်သမား အတွက်ဖြစ်စေ အလုပ်ရှင်အတွက်ဖြစ်စေ တိကျစွာ အကာအကွယ်ပေးတဲ့
ဥပဒေ လက်တွေ့ကျကျ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။
တစ်လလုံးရက်မှန်အောင်အလုပ် လုပ်ပါမှ ရလာတဲ့
အမှန်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အာချောင်သူများနေပြီး တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေ
အဲတော့ မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ် ကုန်တာပေါ့။
တကယ်လိုအပ်နေတာ မြန်မာပြည်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် အလုပ်သမားဥပဒေ အလုပ်ခွင်စည်းကမ်း
အလုပ်ရှင်ဘက် ကအလုပ်သမားကိုေ ပးရမယ့် အခွင့်အရေးတွေပါ။
ပါးစပ်ကသာ ခေတ်သစ် ခေတ်သစ် အမြု့ပ်ထွက်မတတ်အော်ကြ
အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေက နေ လူကောင်းယောင်ဆောင်ပြိး သနားပြကြ လုပ်နေကြပေမယ့်
အခုချိန်ထိ ရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ချန်ထားခဲ့ ဥပဒေတွေကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေဆဲဆိုတာကတော့ လက်တွေ့ ကျတဲ့ ဘ၀တွေပါ။
ကဲ လက်တွေ့ပြောင်းလဲသွားအောင် ကျနော်တို့ အားလုံး ဘာလုပ်ပြီးကြပြီးလဲလို့ မေးခဲ့ရင်
ပြန်ဖြေဘို့ အဖြေမရှိတာ အသေအချာပါဘဲ။
” အထွေထွေဝန်ထမ်းဆို ၀င်ခါစမှာ တစ်သိန်းနီးပါးပဲ ပေးတာကိုး..
ဘယ်စားလောက်ပါ့မလဲ…..။ (တကယ်ကိုမစားလောက်ပါ) ”
တစ်သိန်း ကို မစားလောက်ဘူးတဲ့ ။
အဘ မမှားဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိတောင် ၊
လစာ ၈ သောင်းပဲ ရတာပါ ။
အဘဖောရေ နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိရဲ့ လက်ရှိလစာက တစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော် ရနေပါခင်ဗျ။
အခြားခံစားခွင့်တော့ လုပ်ကိုင်တဲ့ရုံး ဌာန ပေါ်မူတည်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ။
ကွမ်းစားတတ်ရင်တောင် အဲနေ့အဖို့တော့ သွားပြောင်အောင်တိုက်ပြီး
ကိုပေါက်ပြောသလို ဘာမေးမယ်မှန်းမသိပေမဲ့ လက်လှမ်းမှီသမျှ
ပြည်တွင်းရေး၊ နိုင်ငံတကာရေးရာတွေ တတွတ်တွတ်နဲ့ဖတ်…၀ှီး ပြောရင်းနဲ့မေါမိသဗျာ…
အင်းကျီ..ရောင်စုံကြောင်ကျား…ရင်ဘတ်ဟဗြဲ (အပေါ်ဆုံးကျယ်သီး၂လုံး ၃လုံးတတ်မထား)
လျှောက်လွှာဖြည့်လို့ စာရေးမက ပုံစံထုတ်ပေးတော့..ဘောပင်မပါတာနဲ့
ဒီအလုပ်ကိုမရလဲဘာအရေးလဲကွာ….လို့ လာလျှောက်တဲ့ အလုပ်ကို
ကျနော်တော့ အဲဒီ ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့လာလိုတော့ ဆောရီးပဲ…လျှောက်လွှာတောင်ကိုမကြည့်ပဲ
အဲဒီစကားလေးကို လက်ခံမိတယ် လေးလေးပေါက်ရေ..။